LG က V10 အသစ်ကိုမျက်နှာပြင်နှစ်ခုဖြင့်ပြသလိုက်သည် Androidsis
LG က V10, dual-screen စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်မျိုးကိုကြေငြာလိုက်သည်
LG မှသတင်းများသိပြီးနောက်မနက်ခင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည် ဒုတိယမျိုးဆက် Watch Urbane၎င်း၏ထူးခြားချက်မှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစွမ်းရည်ဖြစ်သည်၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့တွင်စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးထည့်သွင်းထားသည် အသစ်တစ်ခုကိုစီးရီးဖွင့်လှစ်.
နောက်ဆုံး၌ LG သည် V10 ပုံစံဖြင့်စမတ်ဖုန်းသစ်ကိုပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်ရောက်ရှိလာခြင်းကိုဖော်ပြသည့်ကောလာဟလများမှန်ကန်ခဲ့သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် G4 Note နှင့် G4 Pro မဟုတ်တော့ပါ။ LG V10 သည်အသစ်အဆန်းတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံး mobile V ကိုmultimedia အတွေ့အကြုံများအတွက်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရည်ရွယ်သည့်စီးရီးအသစ်။
LG V10 ကို multimedia စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းများဖြင့်ရှေ့ကင်မရာနှစ်ခု၊ လက်စွဲဗီဒီယို mode နှင့်ဒုတိယမျက်နှာပြင်ကဲ့သို့သောထူးခြားချက်များကိုဖော်ပြသည်။ ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်းကိုရင်ဆိုင်နေရသည် တစ် ဦး မျှမျှတတစိတ်ပိုင်းဖြတ်အမြင်အာရုံစတိုင် ဤဖုန်း၌ရှိသောသံမဏိပစ္စည်းများကိုဖုံးအုပ်ထားသော silicone skin ကြောင့်အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အခြားကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုမှာသင်၏ဒုတိယမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ ၅.၇ လက်မအရွယ် QHD IPS Quantum မျက်နှာပြင်အပြင်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်တွင်ရှေ့ဘက်ထိပ်တွင်ထည့်သွင်းထားသောသေးငယ်သည့်တစ်ခုရှိသည်။ ဒီအလယ်တန်းမျက်နှာပြင်၏တိကျတဲ့ function ကိုဖြစ်ပါတယ် အမြဲတမ်းအပေါ်ပါ အသုံးပြုသူသည်အဓိကအချက်အလက်ကိုဖွင့်စရာမလိုဘဲအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကြိုတင်၍ ဘက်ထရီကိုချွေတာခြင်းဖြစ်သည်။
ဤဒုတိယဖန်သားပြင်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် အသိပေးချက်များ၊ စာတိုများကိုပြသပါ သို့မဟုတ်အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများ။ အကယ်၍ သူသည်အဓိကမျက်နှာပြင်မှဗွီဒီယိုကြည့်နေစဉ်နှင့်၎င်းသည် Galaxy S6 ၏အစွန်အဖျားနှင့်ဆင်တူနေလျှင်ဤနည်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူသည်ကြားဖြတ်မရပေ။
LG V10 တွင်ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖမ်းနိုင်စွမ်းအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ LG G4 ကင်မရာ၏အောင်မြင်မှုသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသဖြင့်စမတ်ဖုန်းဓာတ်ပုံကိုနှစ်သက်သူများသည်အရည်အသွေးမြင့်ပုံရိပ်များကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသောပုံရိပ်များကိုဖမ်းယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ OIS နှင့်အတူ 16MP နောက်ကင်မရာ 2.0 / F 1.8 နှင့် dual -MP 5MP ကင်မရာနှစ်လုံးပါရှိသောရှေ့မျက်နှာစာ။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ မှတ်တမ်းတင်ဖို့အချိန်ရောက်ရင်၊ သင်၌ခံစားချက်ရှိနိုင်သည် ဗီဒီယိုကိုပညာရှင်ဆန်အောင်လုပ်ပါ လက်စွဲဗီဒီယို mode နှင့်အတူအချို့သောအင်္ဂါရပ်များအကြား Steady Record, Snap Video, Quick Video Editor, Quick Share, Audio Monitor နှင့်လေဆူညံသံများအတွက် filter ။ HD, FHD သို့မဟုတ် UHD ကဲ့သို့သောရှုထောင့်အချိုးနှစ်ခု၊ ၁၆: ၉ နှင့် ၂၁: ၉ တို့ကဲ့သို့သောကွဲပြားသောဆုံးဖြတ်ချက်သုံးခုကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ရှေ့ကင်မရာနှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားသည် 120 ဒီဂရီ selfies ယူပါ နှင့် standard 80. ဤဖုန်းတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းကွဲပြားသောထောင့်များကိုဖမ်းယူရန်အတွက် V10 ၏ကင်မရာများအားလုံးအသုံးပြုသည့် Multi-view recording function ပါ ၀ င်သည်။
Qualcomm ၏ Snapdragon 808 ချစ်ပ်
5,7 x 2560 1440ppi ဖြင့် ၅.၇ လက်မအရွယ် QHD IPS Quantum မျက်နှာပြင်
၂.၁ လက်မအရွယ် IPS Quantum အလယ်တန်းမျက်နှာပြင်သည် 2,1 x 160 နှင့် 1040 ppi
RAM ကို 4GB
F16 / OIS 1.8 ပါ ၀ င်သော 2.0 MP နောက်ကင်မရာ
dual-lenses ပါ ၀ င်သည့် 5MP ရှေ့ကင်မရာ
ဆက်သွယ်မှု - Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.1 / NFC / USB 2.0, 3G, LTE-A Cat ။
3000 mAh ဘက်ထရီ (လဲလှယ်နိုင်သည်)
အရွယ်အစား: 159,6 x 79,3 x ကို 8,6 မီလီမီတာ
အလေးချိန် - 192 ဂရမ် (?)
LG V10 ကိုအရောင်ငါးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီးယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မသိသေးပါ ၎င်း၏ရရှိမှုမဟုတ်သလို၎င်း၏စျေးနှုန်းမ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG က V10, dual-screen စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်မျိုးကိုကြေငြာလိုက်သည်
LG သည်ဒုတိယမျိုးဆက် Watch Urbane ကို LTE ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ပေးခဲ့သည်